Inogona Kuti SnapChat Ive Inotevera Nhanho MuRwendo Rwako Mutengi?
Munzira dzakawanda, izvi zvese zvinoenderana nekuti mutengi wako ndiani uye kuti rwendo rwavo nderupi.
Wese munhu anoziva nezve Snapchat panguva ino, handiti? Chero ani achiri murima pane ino? Kana zvirizvo, hezvino zvese zvaunoda kuti uzive… Ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo pasocial network pakati pevane makore gumi nemasere - makumi maviri nemashanu ekuberekwa. zvinoita sekunge hapana munhu arikuita mari pazviri.
Zvino, chikamu cheichi ndechekugadzira. Kune nzvimbo shoma chete dzaunogona kushambadza muSpapchat, uye dzese dzinotyisa. Iwe unogona kubhadhara kushambadzira mu "Rarama Nhau," uye zvinyoronyoro uwane gumi repiri pre-roll nzvimbo iyo vashandisi vanogona kungobaya chete pasina kumirira zvachose. Iwe unogona kushambadza pane yavo nyowani "Tsvaga" chimiro, icho chakagadzirira kukanganisa nzira nzira nhau nenhandaro nzvimbo kubva kuCNN kuenda kuComedy Central kuburitsa zvirimo. Dzese sarudzo idzi dzakashata kunze kwekunge iwe uchida chaiyo inodhura uye isingafungidzirwe kuwedzera mukuzivikanwa kwechiratidzo.
Mubvunzo uyo pasina ari kubvunza, zvakadaro, ndewekuti tingaise sei Snapchat mune izvo isu ziva atove kushanda? Vanhu vazhinji vari kunyora kubva pasocial network sechiitiko (chikanganiso) uye zvimwe zvakawanda zviri afraid yekutamba pane network nekuti ivo havazvinzwisise (hombe kukanganisa). Ichi ndicho chikonzero vanhu vanobhadhara mapenzi vana vakaita seni kuti vapinde vachitamba vachitenderedza neaya matekinoroji matsva, uye ini ndiri akakatyamadza kuti vanhu vazhinji havana kuziva izvo zvavanazvo pamunwe wavo - chaiko.
Ini ndinogona kufunga nezve gumi nemaviri maindasitiri - kusanganisira husiku husiku, maresitorendi, uye zvitoro zvemuno - vanogona kubatsirwa zvakanyanya nekusanganisa mahara zvinhu yeSnapchat muchirongwa chavo chekushambadzira, uye zvese zvinopinda muBhaibheri zvinotevedzwa nevashambadzi vepamadhijitari… Rwendo rwemutengi.
Rwendo rweMutengi rweMutengi
Kana iwe uine ruzivo rwakakwana kuti uve kuverenga Martech Zone, Ndine chokwadi chekuti munoziva zvese nezverwendo rwevatengi rwechivanhu. Ruzivo rwevatengi rwese rwunoratidzwa mune ino modhi seyakanaka, sarudzo inonzwisisika inoitwa neanofunga sarudzo. Kutanga, mutengi anoziva kuti vane dambudziko, vobva vatanga kutsvaga mhinduro, vobva vadzidza zvakawanda nezve mhinduro yako, vobva vatenga, vozove mumiriri wayo. Inoratidzika kunge yakachena, yakapusa. Anenge akanyanya kuchena uye akapusa…
Imhaka yekuti ndizvo. Munzvimbo yeB2B, ndizvo chaizvo zvine chekuita. Mune iyo B2C nzvimbo iri dzimwe nguva zvine chekuita, asi zvinonyanya kufanana nemutemo wechigunwe pane chairo fomula. Saka ungaita sei kuti ugadzirise uyu mutemo wechigunwe kuti ukwane Snapchat muchiitiko ichi?
Kugadzirisa Rwendo rweChizvarwa Chinotevera
Ngatitangei nechinhu chemarudzi. Ini handisi pano kuti ndinyore imwe yemaitiro chidimbu chekuti ungashambadza sei kumamirioni. Izvo zvakanyorwa zvakanyanya nevanhu vakura zvakanyanya kuti vatinzwisise kana vadiki kwazvo kuti vanzwisise bhizinesi, uye ini handina kana basa nazvo. Izvo zvataurwa, pane musiyano weBIG pakati pekuti vadiki vanoshandisa sei ruzivo uye nemabatisi evatengesi samapere ivo vanopedza ruzivo.
Semuenzaniso, mireniyamu seyakazara ane mukurumbira nekusavimba kushambadzira. Iko kuwedzera kukuru uye vanhu vazhinji vanomira ipapo. Izvo zvisina anobvunzwa nemunhu ndizvo ndeapi millennials atiri kutaura nawo?
Vakachenjera kupfuura vese vane mari yakawanda yekusavimba kushambadzira, asi ivo vanofarira kutsvagisa uye vanonyatsoda mhando dzinoedza kudonhedza navo. Vakakurira pamwe nehuwandu hweruzivo rwevanhu pamunwe wavo uye vanoishandisa kugadzirisa kubhawa kubheja, kuongorora pahuro pavo, uye kusarudza pekushandisa mari yavo. Kune iri boka, humbowo hwemagariro ndimambo, uye chero chinhu chinoita senge chakanyanyisa kutengeserana chinowanzo kurasikirwa nechikumbiro.
Saka izvi zvinomutsa mubvunzo unonyanya kukosha, ndingaite sei kuti ndiwedzere chikuva chisingatsigire vashambadziri kushambadzira kune veruzhinji vasingade kushambadzirwa?
Snapchat Discovery Inoenda Kure Beyond Snapchat Tsvaga
Pamasvondo mashoma apfuura, timu yangu paMiles Design yanga iri kuedza nekutengesa kweSnapchat, uye tawana mikana inotonhorera papuratifomu yakasununguka zvachose uye ine mukana wekutyaira bhizinesi, kwete kungozivikanwa kwechiratidzo.
Fungidzira, semuenzaniso, iwe uri bhawa rinotambura kuwana mudiki makumi maviri-nguva yekuuya pamusuwo. Kune matani eayedzwa-uye-echokwadi mhinduro kudambudziko iri, kusanganisira zvinwiwa zvakanyanya, husiku hwe trivia, mimhanzi mhenyu, nezvimwewo, asi zvizhinji zvezvikurudziro izvi zvinoenderana nezviratidzo zviri kunze kwenzvimbo yako kupfuura chero imwe nzira yekushambadzira. Ko kana iwe uchida kutyaira vanhu en masse kunzvimbo yako kuitira kuti zvako zvinokurudzira kukurudzira kutenga?
Zvishoma zvinhu zvakasarudzika nezve Snapchat senge pasocial network, kusanganisira geo-mafirita. Zvino, Snapchat haizoregi iwe kuti ugadzire geo-firita kune rako bhizinesi, asi ivo chido rega iwe ugadzire geo-firita yenzvimbo yako. Maitiro aya akasununguka zvachose uye anogara nekusingaperi, zvichireva kuti chero nguva munhu paanouya pamutsipa wako wematondo, vanogona kushandisa geofilter yako paunenge uchitora shamwari dzako, pakupedzisira uchityaira traffic yakawanda kunharaunda yako uye, netariro, bhawa rako. Wedzera izvi nekushambadzira (Titorere mufananidzo neiyo geofilter uye wopindirwa kuhwina chinwiwa chemahara, nezvimwewo) uye iwe unogona kuve wezvemagariro midhiya juggernaut neako akakodzera huwandu hwevanhu mune imwe nyaya yemwedzi.
Ini handisi ndega mune izvi, futi. Snapchat ine chaizvo vakashandisa maGeofilters kuba mainjiniya kubva kuUber, uye kufungidzira kwangu ndekwekuti havazomira ipapo. Kune matani ekunyorera kweiyi tekinoroji, iwe unongofanirwa kuve uchida kuyedza.
Izvi zvese zvinonyatsovira kusvika pakubatana. Snapchat haina kusiyana, ingori nyowani. Kana iwe ukapa vashandisi neruzivo rwakakura uye nzira huru yekubatana nekuita, iwe uchakunda. Kune akawanda B2C mabrands anotarisa kuti aite vechidiki boka, iyi sarudzo huru… Saka nei vese vari kuzvitya?
Kana iwe uchida kutaura nezve Kushambadzira, Tekinoroji, kana dangwe ravo, Kushambadzira Tech, ini ndinoda kutaura. Chengeta iyo hurukuro inoenda pa Twitter uye ndirege ndizive zvimwe zvaunoda kuverenga nezvazvo!
Tags: kurambidzaMarketingmamaira dhizainiZviuru zvemakoresnapchatsnapchat kushambadzira
Nemamiriro akasiyana siyana kubva ku economics kusvika kumamhanzi, Tim Hickle awana imba yakanakisa munzvimbo yekutengesa yedhijitari. Nhasi, Tim ndeyeDhijitari Kushambadzira Strategist yeMiles Dhizaini. Chinangwa chake chekutanga ndechekubatsira iyo irikure yekumaka yakasimba kuvaka rondedzero yemadhijitari sevhisi inopoteredza hunyanzvi hwake, kusanganisira inbound kushambadzira, email kuriritira, uye zvemagariro commerce.
Kana iwe uchida kubatana, inzwa wakasununguka kupfura Tim email pa TimHickle@gmail.com kana kubatanidza pa Twitter @TimHickle
Maitiro ekuvaka uye kuteedzera Yako Instagram Kukwidziridza kana Campaign